Keyframes ho avy tsy ho ela ny mpanafika toetra | Famoronana an-tserasera
Tonga izy ireo keyframes an'ny Adobe Character Animator misy dikany betsaka. Amin'ny heviny fa isika izao dia hanana fifehezana bebe kokoa ireo frame izay mamorona sary mihetsika izay hataontsika.
Nanambara i Adobe fa ho avy tsy ho ela izy ireo fanaraha-maso ny keyframes ao amin'ny fampiharana anao ny sarimiaina. Ho an'ireo mpanentana, na ireo matihanina na ireo amateurs, dia hidika izany fa be dia be ny zavatra azo atao rehefa manafana ny toetrany sy ny seho misy azy ireo.
Taorian'ny fivoriana omaly ny fahatongavan'ny fanatsarana ny atiny-Aware Fill amin'ny Photoshop, ary inona dia mieritreritra majika bebe kokoa noho izany toetra izany, keyframe dia zava-dehibe kokoa amin'ny Character Animator.
Ho anao izay tsy mahazatra ny Character Animator dia lazao fa fitaovana manome fiainana ny sary nafarana avy amin'ny programa Adobe hafa izany. Ny tena mampiavaka azy dia ny fahaizanao ho an'ny fakana sary mihetsika amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny camcorder na mikrophone anay.
Hatramin'izao, voafetra ho an'ny famoronana ny fampiharana ny horonan-tsary misy fetrany. Izy irery ihany no nahavita nanao ny tarehin-tsoratra hiteny na hihetsika ao amin'ilay horonan-tsary. Izy io dia hiaraka amin'ireo keyframes ahafahan'ny mpanentana manova ny fananana toy ny toerana, ny refy na ny fihodinana. Izay hanokatra safidy maro karazana ho azy ireo.
Miresaka momba ny inona isika ny volomaso ny toetra amam-panahy dia afaka mavitrika kokoa ary andiany hafa amin'ny antsipiriany izay tsy azo atao hatreto amin'ny fampiharana toa an'i Adobe.
Manoro hevitra anao izahay hijery ny horonan-tsary mba hahazoanao hevitra tsara kokoa ny mety rehetra ho avy tsy ho ela amin'ny Character Animator avy amin'ny Adobe. Ny keyframe sasany dia lehibe kokoa noho ny zava-dehibe rehefa manentana ary hanome elatra an'ity fampiharana Adobe ao amin'ny Creative Cloud ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Tonga ao amin'ny Adobe Character Animator ny Keyframes
Azonao atao izao ny manaraka ny kaonty Instagram ofisialy izay manampy ny mpamorona atiny